yemifino enjalo, njengo-anyanisi, has ukunambitheka elungisiwe futhi iphunga. Ukusetshenziswa Its e ukudla, lisetshenziswe abantu ukuphulukiswa. Anyanisi etshalwa yonke indawo, ngisho ekhaya. Anakho izinhlobo eziningana, kuhlanganise nezinhlobo ezifana anyanisi kanye nomndeni. Liphinde i umnsalo Indian Nokho, ukudla ayikwazi adliwe. Ukuze ama kwakukukhulu futhi ezifanele ukusetshenziswa, kubalulekile ukwazi ukuhlela ukutshala anyanisi kanye nomndeni.
Growing onion isibani
Anyanisi ngokuvamile zikhule ngelula. Indlela elula ukuthenga Onion ngomumo eyenziwe uyositshala, nzima - sikhule anyanisi kusuka imbewu. Esimweni sokuqala anyanisi ukuthenga watshala ensimini, inhlabathi kwaba ukuwa ngisho ngemba egcwele umquba rotted. Ngasekupheleni kwehlobo ukuvuna ama ezinkulu, okuyinto edliwayo.
Kodwa ukutshala anyanisi anyanisi kusuka imbewu - inqubo eside, sisalokhu by kakhulu ngendlela ezimbili zonyaka.
Ngonyaka wokuqala kusuka imbewu ekhule Onion. Oku-imbewu kufanele ziqhume. Ukuze wenze lokhu, basuke zihambisana Isikhwama sendwangu, okuyinto oswakanyiswe amanzi. I sikhwama ibekwe endaweni efudumele futhi ulinde, lapho ingeke ibe khona amahlumela, ungakhohlwa njalo afafaze ngamanzi. Khona-ke lihluma imbewu abahlakazekile ku anemifantu zangaphambi uzilungiselele, kulula iwe inhlabathi elele. I imibhede embozwe ifilimu kuze amahlumela kuqala, bese-ke kumelwe kususwe. Lapho amahlumela ngokuqina, kumele afeze ehlambulula ukuze ibanga phakathi isitshalo ngasinye 3-4 cm. Ukunakekelwa ephakeme kuyehla kube ukususwa ukhula futhi ayakhala. Iqiniso lokuthi sekuyisikhathi bambe up the ama, uthi kwabawayo futhi yomile onion eziqongweni. ama ekhethiwe akhethiwe: edliwayo elikhulu nalabo okungabonakali, kufanele kahle omisiwe futhi agcinwe kuze kube unyaka ozayo. Ngo isizini entsha sevok lawela phezu imibhede, futhi ekupheleni ehlobo unika isivuno esihle.
Onion umndeni, ezikhulayo
Uma ukutshala anyanisi kuthatha isikhathi, bese umndeni onion - isivuno ayashesha kakhulu, nakuba Yiqiniso, ukubanakekela nawo uyadingeka. onion Umkhaya unegama yezesayensi - shallots, nakuba isetshenziswa kakhulu kuyaqabukela. Kumele sikhokhe intela ukuthi Onion umndeni ukuvuthwa kuneNingizimu isibani - ukutshala ukuze sokuvuna kuthatha cishe 50-70 days. Umndeni-ke ubizwa ngokuthi ngenxa ama elilodwa watshala mkhaya lonke ikhula bulblets ezincane. ukutshala isimiso esifanayo njengoba ibilokhu echazwe ngenhla. Nokho, kwezinye izimo, omunye isibani ihlukaniswe izingxenye ezimbili noma ezine, ngaleyo ndlela kwande inani lokutshala ezibonakalayo. onion Umndeni akuyona zizinkulu isibani, kodwa kungcono kakhulu igcinwe, ngokuvamile eminyakeni 2-3. Abatshali onjengaye, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa izinga nokuvuthwa kodwa linesizotha kwizimo ukukhula.
Indian onion ukutshalwa
anyanisi Indian (i ornithogalum yesayensi tailed) njengoba onion isibani nomndeni kungokwalabo umndeni ka eziyizigaxa, nakuba leli temu kuncane kakhulu abafana ngakho. Okokuqala, ngokwalo anyanisi Indian anobuthi kakhulu, nakuba wathola ngazo imithi. Kufeza indima ebalulekile umthetho main "Ungeqisi it." Okwesibili, anyanisi Indian unesitshalo isikhathi eside kunaleso engadini ekhishini, nakuba ukutshala yayo futhi yenzeka ezimweni ongaphandle. ikhule kusuka imbewu noma ukuboleka ama ezincane okuyinto ngokuvamile zikhule eduze umzali. Lapho ukutshala chive embiwe phansi kuphela ingxenye yayo phansi, kodwa kungenjalo itholakala ngokuphelele phezu. Kusukela ama fade amahlamvu amahle aluhlaza, ezimazombe ekupheleni. Ngenxa yalezi amapheshana kungacacisa ukuthi engu-anyanisi Indian, njengoba unyaka ngamunye ikhula amahlamvu eyodwa kuphela. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-anyanisi Indian kuyinto enhle kakhulu futhi blooms nehlala njalo, kunilethele injabulo umnini wayo ngoba izimbali zayo ezincane ngesimo izinkanyezi.
Hlanganisa Mvuni "Akros." Mvuni "Akros": ezibekiweko lobuchwepheshe, incazelo isikimu kanye nokubuyekeza